“Maxam Cumar Dacay Waa Adeerkay Eedayse” Sidaas waxaa yidhi… – Rasaasa News
Jun 25, 2011 "Maxam Cumar Dacay Waa Adeerkay Eedayse" Sidaas waxaa yidhi...
“Maxamed Cumar [Jwxo-shiil], waa adeerkay, reer Cumar waa shan qoys, waliganana Jwxo-shiil ma aanaan is intifaacsan, intii uu Somaliya ka shaqaynayeyna gurigiisa ruux reer Cumar Dacay ah koob shaaha kama kaban.” sidaas waxaa yidhi …
TV-ga SI, ayaa waxaa uu xalay baahiyey barnaamij maqal iyo muuqaal ah oo runtii ruuxii daawada uu dubku dhaqaaqi nac iyo cadaawad hor lehna uu u qaadi kooxda Jwxo-shiil, ee Jidgooyada u jirta.
Ayaa waxaa aad u calaalacalay oday sheegay in uu adeer ugu quman yahay oo ay da,a hayn la,aan badani ay ka muuqato.
Odayga ayaa yidhi “dhibaatada uu noogaystay Adeerkay Maxamed Cumar Dacay, waa mid u dhimanayd reer Isaaq gaar ahaana qoyska reer Cumar Dacay.”
Odayga ayaa kolkii uu ka hadlayey wada dhalashada ka dhaxaysa iyo sida ayna ehelnimo uga dhaxaynin waligoodba ayaa qiiroonaya. Odayga iyo ummada ku nool gabalka Ogaden nolol bay u baahan yihiin ee gubid iyo cabsi galin uma baahna.
Barnaamijka, oo ay dawladu ugu talo gashay in ay shacabka ku tusto sababta kooxda Jwxo-shiil, loogu daray ururada argagixisada ah.
Barnaamijka waxaa lagu soo bandhigay, gaadiid shacab oo la gubay, baabuur hayada sama fal oo la gubay, dad shacab oo laxaad go,an iyo haween haysta caruur agooma ah oo ilmada duugaya.
Waxaa barnaamijka ka dhex muuqday, masuul Somali ah oo ka dhex hadlaya fadhiga 500-ta boqol ee baarlamaanka federalka Ethiopia, isaga oo af Somali ku hadlaya ayuu u sharxayaa su,aal la waydiiyey 23 xubnood ee dawlada federalka ah ugu jira degaanka Somalida.
Su,aasha ayaa ahayd degaanka Somalidu wuu ka dambeeyaa degaanada kale ee Ethiopia, Somalina waxaa lagu yaqaan firfircooni iyo isbadal samayn ogi?
Xubinka ayaa ku jawaabay argagixiso ayna Ethiopia, inteeda kale ogayn ayaanu la tacaalaynaa. Kuwaas oo is hortaagay ganacsigii dadweynaha, gumaya baabuurta hayadaha samafalka, gubaya dhismayaasha caafimaafka, gubaya Iskuulada, dhacay reer miyiga, dilaya shacabka, kufsanaya haweenka.
Barnaamijka oo lagu waraysta dad isugu jira; reer miyi, xubno dagaal yahano ah oo nabad qaatay iyo xunaha degaanka Somalida ugu jira baarlamaanka dawlada dhexe.
Gabagabada Barnaamijka ayaa waxaa kuu soo bixi sababta loogu daray argagixisada, waxaadna is odhan dawladu way la daahday barnaamijka.
Warar Dheeraad ah oo Aan ka Helay Dilkii Cabdi Cabdulahi Muxumed